Google na akwadebe mwekota nke ịkwụ ụgwọ site na Google Assistant | Gam akporosis
Google na-akwadebe mwekota nke ịkwụ ụgwọ site na Google Assistant
Google emeela nnukwu nzọ ma tinye ọtụtụ olile anya n'ọdịnihu nke Google Assistant, agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na a ka nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ ruo mgbe ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ atụmatụ niile ahụrụ na ngosipụta nke ngosi ya. .
Otu n'ime njirimara ndị a pụrụ ịhụ na ọkwa ikpeazụ n'October bụ mmekọrịta nke Google Assistant na ọrụ ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ewerela nzọụkwụ mbụ na ntuziaka ahụ na mmelite beta kachasị ọhụrụ na ngwa Google.
Mgbe XDA nyochachara ngwa Google Assistant APK, achọpụtala na ngwa kachasị ọhụrụ nke ngwa Google, mbipute 6.11.13 beta, nke nwere usoro nke koodu na-atụ aro na ịkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ na ọrụ.
Dịka usoro ndị a ma ọ bụ ụdọ nke koodu, Onye enyemaka Google ga-enwe ike ijikwa kaadị akwụmụgwọ dịka ọtụtụ ngwa na-eme, na mgbakwunye na inye njikọ kpọmkwem na nkwado Google ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka. Usoro ndị a na-ekwupụtakwa peeji nkwado Google nke na-amalitebeghị ịrụ ọrụ, mana URL nke ya na-egosi nke ahụ onye enyemaka na Google Home ga-enwekwa nkwado maka ịkwụ ụgwọ.
Agbanyeghị na ọrụ ndị dịka Uber dakọtara na Homelọ Google, ịkwụ ụgwọ gafere Ntụziaka Google na / ma ọ bụ Homelọ Google enwere ike iji maka ịzụ ahịa n'ịntanetị na ọrụ nnyefe, yabụ ọ dị ka enwere ike iji njikọta ndị a maka ọrụ dị ka Expresszụ ahịa Google Express.
Usoro nyochara na-egosipụtakwa nke ahụ Onye enyemaka Google ga - gunyere "akọrọ ngwaọrụ" Na, ọ bụ ezie na amatabeghị ihe okwu ahụ nwere ike ịpụta, ọ ga-ekwe omume iche na sistemụ a ga-ekwe ka ịkwụ ụgwọ kwa ngwaọrụ n'ụzọ ọ bụ naanị ụfọdụ ekwentị nwere ike ịnweta ebe nkwụnye ego, ikekwe dịka usoro iji zere nke ahụ ụmụ ntakịrị na-aga ahịa na mberede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-akwadebe mwekota nke ịkwụ ụgwọ site na Google Assistant
Samsung akwụsịla nkenye nke gam akporo Nougat na Galaxy S7 na S7 ihu
Esi gbanwee ngosipụta ngosi nke gam akporo na-enweghị mgbọrọgwụ